Madaxweynaha Sudan oo ka hadlay Saameynta Cunaqabateynta saaran dalkiisa | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha Sudan oo ka hadlay Saameynta Cunaqabateynta saaran dalkiisa
Madaxweynaha Sudan oo ka hadlay Saameynta Cunaqabateynta saaran dalkiisa
Madaxweynaha Sudan Cumar Xasan Al Bashiir ayaa sheegay inay xukuumadiisu ay ku taagan tahay dhabbaha nabad ku soo dabaalida geyiga dalkiisa,isla markaana ay qaadayaan talaabo shacabka u horseedaysa nabad iyo baraare.
Madaxweyne Bashiir ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu magaalada Khartuum kula yeeshay koox ka kooban khubaro iyo warfidiyeen Mareykan ah,wuxuuna u sheegay in dagaalka ka socda Sudan uusan aheyn mid la dhashay xiligii gobonimada dalkiisa, balse uu yahay mid soo jireen ah,wuxuuna intaa raaciyay inay dawladiisu soo dhaweynayso heshiiskii nabadda oo ay wada gaareen garabyada hubeysan ee dalkaasi.
Wuxuu Madaxweynuhu intaa raaciyay in go’aankii xabad joojinta oo ay hore u gaartay xukuumadiisa uu weli sidiisii u taagan yahay,isagoo dhanka kale soo dhaweeyay kaalmada bani’aadanimo oo ay dowladda Mareykanka u fidinayso dadka uu saameeyay dagaalka,kana barakacay hoygooda.
Madaxweynaha Sudan Cumar Xasan Al Bashiir ayaa dhanka kale cadeeyay in wadciga dabiiciga ah ee dalkiisa haatan ka taagan uu yahay saameynta cunqabateynta saaran, wuxuuna sheegay in uu ku raja weyn yahay in cunaqabateyntaasi laga qaado,isagoo ballanqaaday inuu u hagaansami doono fulinta dhamaan qodobadii lagu heshiyay oo ay Dowladda Mareykanka goob joog ka aheyd.
Previous articleMaamulka Gobolka Hiiraan”Waxaan si buuxda u taageeraynaa madaxweynaha Cusub ee Hirshabeelle
Next articleMadaxweynaha Falastiin oo soo dhaweeyay go’aanka Dhaq-dhaqaaqa Xamaas
Raisulwasaare Mohamed Hussein Rooble oo caawa qaabilay Safiirka Masar ee soomaaliya.
Madaxweyne Hassan sheikh Maxamuud oo caawa la kulmay Gudoomiye Cumar Fillish.
Taliyaha Ciidanaka booliska maamulka Puntland oo maanta gudoomiyey shir Amniga gobolka Nugaal looga hadlayey.
Taliyaha Ciidanaka booliska maamulka Puntland oo maanta gudoomiyey shir Amniga gobolka...